> Resource> Mac> otú nyefee Videos si iPad ka Mac
Ị na-achọ a ụzọ nyefee onwe onye na vidiyo si na iPad ka Mac kọmputa maka edezi na iMovie? Ọ dị mkpa ka idetuo video si iPad ka Mac kọmputa, ma n'ihi na nkwado ndabere na mpaghara, ma ọ bụ n'ihu edezi. Otú ọ dị, i nwere ike ịchọta iTunes apụghị ime ya n'ihi na ị. iTunes nwere ike adịghị ukwuu n'ime n'ihi na ọ bụ otu ụzọ na-transfer software - ebufe video si Mac ka iPad. Na nke a, ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ka nyefee vidiyo si na iPad ka Mac mfe na rụọ ọrụ nke ọma, ga-amasị m ike ikwu na ị iTunes kasị mma enyi - Wondershare TunesGo (Mac). Ọ na-ahapụ ị na-akpali ọ bụla video, video gị 're iwere na iPad ma ọ bụ ndị a ibudatara Internet si iPad ka Mac kọmputa. Naanị na 3 nzọụkwụ, ị kpụrụtụ-eme ya.
Nzọụkwụ 1. Download iPad video ka Mac transfer ngwá ọrụ
Pịa Download button n'okpuru iji nweta Wondershare TunesGo (Mac) arụnyere na gị na Mac na-agba ọsọ nke ọma na Mac OS X 10,8, 10.7, 10.6, 10,9, 10.10, 10,11 ekwu El Capitan. Ọ bụrụ na ị nwere a Windows kọmputa, ị kwesịrị download Wondershare TunesGo (Windows) ka nyefee vidiyo si na iPad ka PC.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ iPad na Mac kọmputa
Jikọọ gị iPad na Mac na iji eriri USB na ẹkedori Wondershare TunesGo (Mac). Mgbe ahụ Wondershare TunesGo (Mac) ga-amata gị iPad-akpaghị aka na-egosipụta iPad Ama na isi window.
Nzọụkwụ 3. Nyefee vidiyo si na iPad ka Mac
Mgbe nzọụkwụ nke abụọ, ị ga-ahụ gị iPad-egosipụta-amalite window. Si ebe a, ị pụrụ ịkpali video si iPad ka Mac kọmputa.
Nyefee iPad iwere videos ka Mac
Ọ bụrụ na ị na-agbalị nyefee videos iwere na gị iPad ka Mac, unu mara na vidio ndị a na-arụnyere na igwefoto Roll. Na nke a, pịa Photos na ekpe kọlụm nke window ikpughe Photos Windows. Na popped-elu window, pịa Igwefoto Roll na nri, mgbe ahụ, ị pụrụ ịhụ gị videos. Họrọ ndị a ị chọrọ nyefee si iPad ka Mac kọmputa, pịa Export. Chọpụta a ebe na-echekwa kpọfere videos.
Nyefee vidiyo ndị ọzọ na iPad ka Mac
E wezụga ndị videos iwere na iPad, i nwere ike iji nyefee vidiyo ndị ọzọ na iPad ka Mac. Na nke a, ị kwesịrị ị na pịa Movies, TV na-egosi, Pọdkastị, iTunes U, etc.on ekpe kọlụm. Pịa bụla udi ịhụ videos. Họrọ videos na ị chọrọ ịkwaga Mac kọmputa, wee pịa Export. Mee a ebe ịzọpụta ndị a kpọfere videos.
Nke a bụ ihe ga-esi video si iPad ka Mac. Ọ bụ nnọọ mfe, ọ bụghị ya? Mgbe ebufe video si iPad ka Mac, i nwere ike imeghe video na iMovie ma ọ bụ Final Cut Pro maka edezi. E wezụga na-ebufe vidiyo si na iPad ka Mac, Wondershare TunesGo (Mac) na-ahapụ gị nyefee music si iPad ka Mac amamihe. Na ọ na-akwado iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 4S, iPod aka 4 na ndị ọzọ ka mma.
Ị nwere ike na-ekiri ndị video nkuzi n'okpuru.
Gbalịa Wondershare TunesGo (Mac) nyefee video si iPad ka Mac!
Olee otú Hichapụ Photos on iPad
Otú nyefee Pictures si iPhone ka Computer
Otú nyefee Music si iPad ka iTunes
Olee otú iji tọghata Video ka HTML5 Video Format on Mac (Yosemite gụnyere)
Fontographer maka Mac
Ụzọ abụọ ka Downgrade Mountain odum odum
Download Best Get tube maka Mac Alternative
aTube nwuchi maka Mac: Download na tọghata Online Videos na Otu Click
MacBook Photo Recovery: Olee naghachi MacBook Photos